Tilmaanta daahyada mesh birta
Magaca alaabta Mesh birta qaybteeda makhaayadda
Midabka Dahab, jaalle, cad, naxaas, cawl, Silver
Cabbirka Dhererka ugu badan 10 mitir, ballaca ugu badnaan 30 mitir.
Qalab Birta aan lahayn l/ Birta
dhexroorka siliga 2
Daaweynta dusha sare Rinjiga dubista / dahaarka titanium
Saamiga Aperture 50%
Goobta hawlgalka Hoteelo, goobo ganacsi oo waaweyn, qurxinta guryaha, qolalka shirarka, hoolalka shirarka iyo goobo kale oo waaweyn
Qalabka daahyada mesh birta
Qalabka birta ah ee birta ah, shabakadda isku xirka silsiladda aluminium, waxaa lagu dhejin karaa saqafka, aluminium aluminium track iyo pulley leh silsilad, jidka waxaa lagu hagaajin karaa derbiga saqafka, jiididdu waxay ka dhigi kartaa daahyada birta si fudud u dhaqaaqo, silsiladuna waxay xakameyn kartaa jilbaha. Caadiyan dharkeena birta ahi waxay leeyihiin 1.5 jeer ama 2 jeer oo isku dhafan. Marka la laadlaadinayo shabagga, waxa ay muujin kartaa qaab mawjad ah si uu daaha uga dhigo mid qurux badan.
Indhoolayaasha birta ah ayaa loo isticmaali doonaa daah ahaan. Waxaan ku siin karnaa qalabka birta ah. Waxaan ku dhejin doonaa rolalka dhinac ka mid ah daaha birta. Markaad alaabta hesho, waxaad ku dhejin doontaa oo kaliya biraha saqafka. Habka rakibaadda waa mid aad u fudud.
Xagga jidka, waxaanu haynaa laba nooc oo raad-raac ah. Mid waa toosan, oo jiidhu waxa uu u dhaqaaqi karaa oo keliya xariiq toosan; Ta labaad, xadiidka qalloocan iyo xadiidka qalloocan; Jidka waxaa loo leexin karaa qaab kasta iyadoo loo eegayo qaabka dhismahaaga.
Daawaynta dusha mesh silig
Marka loo eego midabka iyo saamaynta aad rabto, waxaanu haynaa saddex hab oo daaweyn dusha sare ah.
Daaweyntani waa tan ugu fudud. Shaqadeeda ugu weyn waa inay nadiifiso lakabka oksaydhka. Daaweyntan ka dib, midabka daahyada birta ayaa noqon doona lacag caddaan ah
Tani waa wax yar oo adag; Mashruucani wuxuu ujeedadiisu tahay inuu hagaajiyo adkaanta iyo xidhashada caabbinta aluminium aluminium. Tani waxay midabayn kartaa daahyada birta, iyo suuqa
Daahyada birta ayaa aad u waara oo qurux badan
3. Rinjiga dubista (kan waa kan ugu caansan)
Tani waa habka midabaynta daahyada birta fudud. Kaliya waxay u baahan tahay in la isku daro midabada ka dibna la dhigo daaha birta aagga daahan.
Codsiga mesh duudduuban biraha
Daahyada duudduuban ee birta ah waxay ka samaysan yihiin silig bir ah oo tayo sare leh, silig aluminium ah, silig naxaas ah, silig naxaas ah ama walxo kale oo daawaha ah. Waa qalab cusub oo lagu qurxiyo warshadaha dhismaha casriga ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa daahyada la dego, muraayadaha makhaayadaha, go'doominta hoteelka, qurxinta saqafka, qurxinta bandhigga, qorrax-soo-saarka telescopic iyo wixii la mid ah.
Hore: Dheeman balaariyay mesh aluminium ah oo loo adeegsaday qurxinta dhismaha
Xiga: Mesh bir ah oo tolsan oo loogu talagalay qurxinta wejiga wiishka